जनखबर विशेष Archives - Janakhabar
काठमाडौं । मोहन बैद्य नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी)ले आसन्न स्थानीय निर्वाचन बहिष्कारको नीति अगाल्दै निर्वाचन बहिष्कार अभियान अगाडी बढाई रहेको छ । यसक्रममा उक्त पार्टीका कयौ नेता – कार्यकर्ता गिरफ्तार भै प्रहरी हिरासतमा समेत परेका छन। बाहिर निर्वाचन बहिष्कारको नारा अगाडी सारेको उक्त पार्टीले भित्र भित्रै भने ब्यापकरुपमा स्थानीय निकायको निर्वाचनमा उम्मेदवार खडा […]
कसु (कञ्चन र सुदर्शन ) गुटको कन्तबिजोग !
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पदमुक्त गरेपछि पार्टी फुटाउन तम्सिएका कञ्चन र सुदर्शनको कन्तबिजोग भएको छ । आफुहरुसंग बहुमत भएको कोकोहोलो मच्याउदै कसु (कञ्चन र सुदर्शन ) गुटको भेलामा नगन्य केन्द्रिय सदस्यमात्र उपस्थित भएपछि उनीहरुको कान्तबिजोग भएको हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको ६९ जनाको केन्द्रिय सदस्यमध्ये कसु (कञ्चन र सुदर्शन ) गुटको भेलामा १० जनामात्र सहभागी […]
२०७९ बैशाख २३ गते, शुक्रबार
नेकपाद्वारा केन्द्रीय सदस्य दिपक र गुणराजलाई निलम्बन
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले केन्द्रीय सदस्य दिपक र गुणराजलाई निलम्बन गरेको छ । सो पार्टीका प्रवक्ता प्रकाण्डले बुधबार बिज्ञप्ति जारी गर्दै केन्द्रीय सदस्य दिपक र गुणराजलाई निलम्बन गरेको बताएका हुन् । प्रवक्ता प्रकाण्डद्वारा जारी बिज्ञप्तिमा पार्टीभित्र गुटबन्दी गरेर पार्टी फुटाउने ,जनक्रान्तिलाई बिसर्जन गर्ने, पार्टीको नयाँ ढंगले स्थानीय चुनावलाई प्रयोग गर्ने नीतिका विरुद्ब अफवाह फैलाउने,पार्टी […]
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सचिवालय सदस्य सुदर्शन र कञ्चनलाई पदमुक्त गरेको छ । सो पार्टीका महासचिव विप्लवले बुधबार एक बिज्ञप्ति जारी गर्दै सो जानकारी दिएका हुन्। महासचिव विप्लवद्वारा जारी बिज्ञप्तिमा भनिएको छ – ” सबैतिरका सुझाव एवं सुदर्शन र कञ्चनका गल्तीहरुको प्रकृति हेर्दा उहाँहरु निकै पर पुगिसकेको, विभिन्न वैठक एवं भेलासमेत गर्दै हिडेकोले पार्टी […]
बिमल उप्रेतीको बदमाशी : स्वास्थ्य उपकरणमार्फत् लाखौं ठगी
काठमाडौँ । सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्रमा ब्यापक भ्रष्टाचार गरी उम्कन सफल भएका बिमल उप्रेतीको अर्को ठगीधन्दाको खुलाशा भएको छ । भ्रष्टाचारमा कारबाही हुने भएपछि सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्रको प्रमुख लेखापालबाट राजिनामा गरी म्याक्स मेडिटेक सिस्टम प्रालि खडा गरी उप्रेतीले ठगीधन्दा मच्याएको स्रोतले दावी गरेको छ । यसैबीच, म्याक्स मेडिटेक सिस्टम प्रालिका डाइरेक्टर बिमल […]
नेकपाद्वारा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापन पत्र : तीन बुंदे सहमति तत्काल कार्यान्वन गर्न माग
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापन पत्र बुझाउदै तीन बुंदे सहमति तत्काल कार्यान्वन गर्न माग गरेको छ । सो पार्टीका प्रवक्ता प्रकाण्डले आज बिहान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापन पत्र बुझाउदै सो माग गरेका हुन्।नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विप्लवको हस्ताक्षरमा बुझाइएको सो ज्ञापन पत्रमा नेकपाले तीन वुँदे सहमतिप्रति पुर्ण प्रतिवद्धता सहित अक्षरसः लागु […]
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विप्लव र प्रवक्ता प्रकाण्ड र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबीच प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार भेटवार्ता भएको छ । भेटमा पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाको बारेमा छलफलका साथै सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबीच भएको तीन बुंदे सहमतिले दिएको संदेशको बिषयमा समेत छलफल भएको बताइएको छ। यसैगरी , सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबीच भएको […]
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रवक्ता प्रकाण्डले सहिद परिवार र घाइते कार्यकर्तासंग भेटघाट गरेका छन । शनिबार भएको उक्त भेटघाट कार्यक्रममा प्रवक्ता प्रकाण्डलाई भेटेपछि सहिद परिवार र घाइते कार्यकर्ताले खुशीको आँशु झार्दै प्रकाण्डलाई अँगालो हालेका थिए भने प्रकाण्डले पनि भाबुक हुदै आशु झारेका थिए । सहिद परिवार र घाइते कार्यकर्तासंगै प्रवक्ता प्रकाण्ड पनि भाबुक बनेपछि […]
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका प्रवक्ता प्रकाण्डले ओली र प्रचण्ड देशद्रोही र जनअपराधी तत्वको रुपमा नेपाली जनताका सामु सर्वाङ्ग भएको ठोकुवा गरेका छन् । प्रकाण्डले कथित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले आभूषित वर्तमान दलाल पुँजीपति वर्ग, त्यसको राज्य सत्ता,दलाल संसदीय शासन व्यवस्था, यसको नेतृत्व गरिराखेको के.पी. ओली सरकार र दलाल नेताहरु अभूतपूर्व संकट, विघटन र लाजमार्दो असफलताले […]
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पार्टी पुनर्गठन दिवस भव्य रूपमा मनाउँने
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आगामी मङ्सिर ६, ७ र ८ गते सातौँ पार्टी पुनर्गठन दिवस भव्य रूपमा मनाउने जनाएको छ । पार्टी स्रोतका अनुसार ६ देखि ८ गतेसम्म देशव्यापी प्रचारप्रसार, प्रदर्शन, सभाहरू र उत्सव आयोजना गरी पार्टी पुनर्गठन दिवस मनाउन लागिएको छ । नेपालमा दस वर्षसम्म चलेको महान् जनयुद्धका उपलब्धिहरूलाई धराशायी बनाउने गरी जनयुद्धको […]